Author: Zololrajas Gurg
Ilmi quxxusuun dabranii lafa haaraya barbaadu.
Lachuu saanii bara tti Gadaarra turan. Qaalluun gosa beekamaa keessaa baha. Ituu keessatti Raaba doorii jedhamu. Herbert S Luwis madda saba Oromoo argacuuf afaanoota Kushoota bahaa bakka 24tti qoode. Osoo gaarri, hoqiifi hallayyaan hinjiru tahee, namni hafu hinjiru jedhaa ture barreeysaan Habashaa Alaqaa Atsimeen.
Boorana keessatti — waggaa Gadaa tti d. Baalli kan Melba weeraruu jalqabe Muudannii dhufatee hamma qarqara laga Awaashitti irra qubatan. Jireenya hafuura qabu keessatti dhalli namaa, hubannoota naannoo isaarraa qabuun waan amanu qabaachuu waan malu, bara Gadaa keessattiis ummanni Oromoo waan itti amanu qaba ture. Qaaloota yeroo jennu akka bara dhihoo keessa ummata samuuf jecha sobanii, gowwoomsanii irraa waa guurratan akka qaallichaa Habashaamiti. Wallo keessati kan Gadaa seenax Harmuffaa jedhama.
Gujii keessatti ayyaana bantii haaddachuu Kanneenii alattiis, cidhni seenaw yeroo beekamootti bakka bakkatti godhamu, amantiiniis qaama aadaa hawaasichaa waan taheef, ayyaanni amantii sirna Gadaa calaqqisan bakka hundatti godhamaa ture. Gaafa Afaan Oromoo dubbachuufi ani Oromoodha jedhanii ofwaamuun mootummaa habashaa yeroo sanaatiin hin eeyyamamnetti, Ormoonni lagaafi gosaan garaa gara akka hinbaane gochuudhaan Oromummaan akka gadi dhaabbatu hiriyootasaa waliin nama dalagedha.
Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa a. Aadaa sana keessaa immoo amantiin maddee maal akka fakkaatu kophatti ilaalla. Hojiin isaaniis akka qeesotafii sheekootaati. Haalli isaanii warra biyya bulchuu ykn qondaaloota Gadaa wajjiin walitti hidhataadha. Tuulama keessatti- Miseensa jedhama. Ayyaanoota kana keessaa kan sirna Gadaa keessaa kiaaba polotikaa ilmaan Oromoocalaqqisu ayyaana buttaati.
Kanaaf, sadarkaadhaan bakka itti garaagarummaan jiru tokko kana taha. Humna guddaan itti haa duulu malee, Galaawudoos Oromoo mohuu dadhabee, dahannoo jabaa qotatee Dawaaroo keessa qubate. Abbaa Baahireenuu yeroo akkaataa godaansa Oromoo barreeyse: Ilmi hangafni kabajamuu qaba. Sadarkaan kun, Tuulamafi Ituu keessatti isa afraffaadha.
Yaada kanaaf deebisaa kenni Cancel reply.
Ituu keessatti — Ruuboo jedhamu. Waraanni Adaal Mabraq harka Oromootti baqe, inniniis lbaqatee laga Awaash cehe.
Dalagaa kanaafi kana fakkaatanitti haa bobbahan malee, sadarkaa kanatti tohannoo warraa ala hin bahan. Haa tahuu malee, warri keessaa gurguddaa tahan nijiru: Maadhee hawaasa olii sana keessaa dabalanii jiraachuu dandayu. Ituu keessatti — Doorii Raaba-dorii jedhamu.
Tahullee sadarkaaleen Gadaa jiruuf jireenya dhala Oromoo mara calaqqisiisa. Eega, bakka heddutti Marsaan Gadaa waggaa 40 akka qabaatu olitti ilaalleerra.
Heeraafii seerri biyyaa deenaa aadaatti fudhatamee jabaata, kabajamaas, waan jiruufi seenaq ofii ittiin geggeeffatan taheef seeraafi heerri ni kabajamu jechuudha. Sadarkaalee Gadaafi Murnoota Gadaa: Hambisaaniis lafaa haaraya osoo hinqabatin Minas wajjiin lola gurguddaa osoo godhuu Gadaan isaa dhumeeRoobaleetti dabarse. Waan jaarraa tokko keessatti jalqabee dhumatuusiimiti.
Isaaniis bakka bakkati garagar tahu. Hojii mataa isaanii godhanii hordafuudhaan kan hawaasicha beeksisan, beektoota astronoomiiti.
Humni Oromoo jabaachuun warra wal lolaa turan gidduutti nagaya buuse. Akka mangoddoonni Booranaa himanitti Gadaa jaaruuf yaalii dheeraan eega godhame booda, Gadaan yeroo dheeraaf bifa hojechuu dandayu dhaabbate. Gosa keessaa Qaalluun bahuu dandayuufi hin dandeenye jiru. Qaalluun gosa beekamaa keessaa haa bahu malee, tokko qofa taha jechuumiti.
Seenaa ummatoota addunyaa keessatti godaansa heedduu argina. Hariiroon kun maati duwwaa keessatti hin hafu. Inniniis waanuma hangafummaafi quxxusummaa hawaasa Oromoo keessa turerraa tahuun nimala.
Waan sirna kana keessatti tahan hundi akka aadaafii amala biyyaatti fudhatamee kabajama. Hoodni, safuufi amantiin sirna kana keessa ture hundi nama hunda biratti fudhatamee kabajama; sanii ala bahuun hawaasaa ala tahutti waan fudhatamuuf nam-tokkoo kaasee hamma maatiitti, maatiirraa kaasee hamma sabaatti qaama walii tahanii jiraatu.
Gibeen qabachuuniis yeroo kana jalqabe.